Matongerwo eNyika, 09 Kurume 2018
Chishanu 9 Kurume 2018
MISA-Zimbabwe Yoshoropodza Kubatanidzwa kweMabhiri Anechekuita neKufambiswa kweMashoko
Sangano reMedia Institute for Southern Africa-Zimbabwe, rashoropodza hurongwa hwehurumende hwekuda kubatanidza mabhiri eCyber Crime, electronic transcation pamwe ne data protection pamwechete.
MDC-T Yokurudzirwa Kugadzirisa Nyaya dzeMhirizhonga
Vanhu vakawanda vari kushoropodza mhirizhonga mumapato apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rino.
VaItai Dzamara Vosvika Makore Matatu Nhasi Vapambwa
Nhasi mhuri yekwaItai Dzamara, vezvematongerwo enyika, vemachechi nevanorwira kodzero dzevanhu vari kutarisirwa kuungana muAfrica Unity Square vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu VaDzamara avo vakapambwa muna 2015.
Vanhu Gumi neVashanu Vofa neKudya Hohwa hweMusango Hune Muchetura
Vanhu vana kubva kumhuri imwe chete vakafa mushure mekudya hohwa une muchetura kumusha weThandanani kuFilabusi Matabeleland South. Vamwe vanhu vana vanonzi vari kurwara zvakaipisisa.
Dambudziko reMari Roramba Richinetsa Apo Zimbabwe Yoita Misangano neIMF neWorld Bank
IMF mumazuva mashoma anotevera iri kutarisirwa kutumira nhumwa dzayo kuZimbabwe pasi pechirongwa cheArtilce IV. Parizvino IMF iri kutsvaga nzira dzekubatsira Zimbabwe dzisingadi mari.
Kurume 08, 2018
Zimbabwe neRussia Dzinosainirana Zvibvumirano Mune zveMaindasitiri neKurima
Chimwe chibvumirano chasainwa chakanangana nekuvhurwa kweSpecial Economic Zone iyo ichange ichishandiswa nemakambani ekuRussia kuDarwandale, kuMashonaland West.
Mutemo Unopa Masimba Akawandisa kuMutungamiri weNyika Wopikiswa muDare rePamusoro
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, VaTendai Biti, vamiririra murwiri wekodzero dzezvematongewro enyika, VaMfundo Mlilo, mudare repamusoro pamberi pemutongi, VaDavid Mangota, vachipikisa masimba anopihwa mutungamiri wenyika.
Vanhukadzi Vochema neKushaiswa Mikana Yakaenzana neyeVanhurume
Mumusangano warongwa neUN Women muHarare, madzimai ataura neStudio7 ati kunyange hazvo vafamba mukurwira kodzero dzavo, kusazadzikiswa kwebumbiro remitemo kunoratidza kuti pachine basa guru rekuti kodzero dzemadzimai dzicherechedzwe munyika.
Varwere veItsvo Vochema-chema neMiripo Inobhadharwa muZvipatara zveHurumende
Vamwe vanorwara nechirwere cheitsvo vanoti hurumende inofanirwa kuona zvaingaite kuti mari inobhadharwa muzvipatara zvehurumende pakurapwa nenzira ye dialysis ideredzwe. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhukadzi vemuZimbabwe Vanoti Havaone Zimbabwe Ichizadzisa Chiga che 50/50 Panosvika 2030
Vanhukadzi vemuZimbabwe vanoti havaone Zimbabwe ichikwanisa kuzadzisa tarisiro yekuti mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi inge yakaenzana panosvika gore rakatarwa neUnited Nations ra2030 rekuti pasi rose ringe rave nebudiriro inooneka.